Miyey Itoobiya ku guuleysatay barnaamika dhiraynta? - BBC News Somali
Miyey Itoobiya ku guuleysatay barnaamika dhiraynta?
Dalka Ethiopia ayaa sannadkan sameeyay barnaamijka qaran ee dhiraynta kaasi oo looga go leeyahay in la beero afar billion oo geed muddo seddex bilood gudahood ah, Waxaana la iclaamiyey bishii julay taasoo dadweynaha dalkaasi ay usoo baxeen in ay ka qayb qaataan am ay ka caawiyaan tallaalidda 350 million oo geed.
Dhamaadkii bishii August, dowladda ayaa sheegtay in ay hadda uun gaareen hadafkooda. Laakiin ma run baa in waqtigaas yar lagu beeri karo geedaha sidaa u badan cadeyn intee la eg ayaase loo haya in la abuuray gee in la gaaray dhamaan bartilmaameedkaasi?
Ololahan, oo loo yaqaan 'Green Legacy Initiative', ayaa waxaa ku guuleystay Raysal Wasaaraha heysta abaalmarinta Nabadda ee Nobel peace prize, ee Abiy Ahmed.
Siyaasiyiinta daafaha caalamka ayaa tusaale ahaan Itoobiya u soo qaatay sida ay xoogga u saartay dib u dhiraynta ay dalkooda ku sameenayaan taasi ka looga hortagayo dhibaatada isbadelka cimilada ee adduunka.
Dalka Canada ayaa waxaa uu qorsheynayaa inuu abuuro laba bilyan oo geed.
Itoobiya oo taariikh cusub dhigtay
Xiriirka ka dhaxeeya xaalufinta dhirta iyo dabka ka kacay kaynta Amazon
Dhirta Afrika qaarkeed oo dabar go'aysa
Ethiopia ayaa qabatay munaasabad halmaalin ah 29 kii bishii julay oo lagu beerayo 200 oo million oo geed ah ee guud ahaan dalka taas oo qayb ka ahayd bartilmaameedkoodii hore. Dowladda ayaa ku dhawaaqday in ay bartilmaameedkooda dhaafeen oo in ka badan 350 million geed lagu beeray 12 saacadood gudahood.
Suurogal ma tahay in afar bilyan oo geed la talaalo?
Hadii aad eegto mashruuca seddexda bilood ee lagu beerayo afarta milyan oo geed, waa in ugu yaraan 45 milyan la beero maalin kasta.
Hadii aad xisaabto inta la beeray hal maalin oo la sheegay in 350 milyan oo geed la beerayey taasi oo ah in ka badan 40 milyan oo geed la beero maalin kasta.
Xigashada Sawirka, Girmay Gebru, BBC